Ny marika lehibe dia mivoatra amin'ny fotoana | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 19, 2009 Talata, Oktobra 4, 2011 Lorraine Ball
Tiako ny doka Mac.
Ataon'ny ankamaroan'ny olona, ​​satria mampihomehy izy ireo, nefa tsy manafintohina. Tsy nitondra antsipirian'ny vokatra izahay, fa ao anatin'ny 30 segondra na latsaka, dia mihaino ny mpihaino azy, satria mahazo ny fanaintainana izy ireo ?.
Rehefa mijery azy ireo ianao dia mora ny mieritreritra fa Mac sy Apple amin'ny ankapobeny dia nanao doka be foana. Fa jereo kely ny sasany amin'izy ireo doka voalohany, dia manambara fahamarinana maharikoriko, ary ny tiako holazaina dia hoe ratsy tarehy. Apple dia nanomboka mitovy amin'ny PC miaraka amina doka mavesatra, mivarotra endrika fa tsy tombony.
Tany ho any, teny an-dalana dia nahita ny feony sy ny vazivazy izy ireo. Ny dokam-barotra tany am-boalohany dia mbola somary "mavesatra amin'ny lahatsoratra" ihany, saingy tamin'ny 1979 dia nianatra ny herin'ny sary sy lohateny mahery vaika izy ireo ho fitaovana hisintomana ny sainay. Rehefa mandeha ny fotoana dia nanjary hita maso be ny dokam-barotra ataon'izy ireo, izay tena tanjaky ny vokariny ihany koa. Hitan'izy ireo ny feony.
Ny tanjon'ny orinasa tsirairay dia ny hahitana ny feony. Ny marika dia tsy manomboka mihombo tanteraka, mivoatra rehefa mandeha ny fotoana. Manome fotoana anao hanafainganana ny fivoaranao ny Internet sy ny media sosialy raha mifanaraka amin'ny sehatra rehetra ianao. Ny fanamby dia ny famoronana olona manintona sy mahasarika ao amin'ny Twitter na Friendfeed, izay tohanan'ny toetran'ny tranonkalanao sy ny sisa amin'ny varotrao sy ny doka.
Ary na dia nilaza aza i IBM fa tapitra ny Ny dokam-barotra araka ny ahalalantsika azy Heveriko fa hisy foana ny doka ho an'ny doka mahaliana sy mahasarika izay tohanan'ny marika marani-tsaina sy mahasarika.
Tags: fitaovana haingam-pandehaStumbleUponWordPress
Mampiasa sary mihetsika amin'ny marketing amin'ny mailakao
Oct 20, 2009 amin'ny 11: 23 AM
Manaiky tanteraka ny lahatsoratrao aho ary ny doka mac no orinasa, mahaliana ary misy hatsikana izay mety ho lakilen'ny fampandrosoana tsara.
20 Okt 2009 amin'ny 5:39 PM
Ny hitako mahavariana momba ny doka Apple dia ny tsy fivarotana ny vokariny. Milaza aminao izy ireo fa mahatsiravina ny vokatra hafa.
27 Okt 2009 amin'ny 12:44 PM
Apple dia manampy ny olona hahatsapa ny fanaintainana ary avy eo manome vahaolana. Mety ho foto-kevitra mampidi-doza izany raha tsy tena izy ny fanaintainana.